စိတ်ကူးပျော်ရာ: April 2012
အား မြှားနတ်မောင် ရေးသားပါသည် မေ 1, 2012 at 12:38am
သိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ထပ်တွက် မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ လဲတွက်ပေါ့ ။
ဒီနည်းကတော့ လူတိုင်းရဲ့ ပင်ကိုယ် စရိုက်ကို တွက်နည်းလေးပါ
လူတစ်ဦးဆီမှာ ပင်ကိုယ် `ဇ´ လေးတွေ ပါလာတတ်ပါတယ် ။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ...ကိုယ့်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တွက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်........................။
ရတဲ့ အဖြေ (7) နဲ့ စားရပါမယ် ထွက်လာတဲ့ အဖြေကတော့ ကိုယ့်ရဲ ပင်ကိုယ်စရိုက်ပေါ့ ။
ကဲ .....အောက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ စရိုက်လေးကို ကြည့်ကြတာပေါ့ ....
တွေးမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒုက္ခတော့ တွေ့နိုင်တာပေါ့ ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ သူကဘ၀ကို ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ ဖြတ်သန်းမည့်သူပါ။ သူတစ်ပါးမှာရှိတာထက် လိုချင်စိတ်မြင့်မားနေတော့ လူတော်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ လိုချင်တဲ့ စိတ်ကလေးကို စနစ်တကျ အသုံးပြုသွာမယ်ဆိုရင် ဒိတ်ဒိတ် လူသားဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာ အမှန်ပါ ။။။။။။။
ကျေနပ်တဲ့သူပေါ့ ။ စိတ်ကသာကြီးပါတယ် သူ့နှလုံးသားကတော့ ဖြူစင်လွန်းပါတယ် ။ ဘယ်တော့မှလဲ ကိုယ့်ဘက်ကစပြီး ရန်မလုပ်ဘူး သန့်သန့်လေးပြောတတ်ဆိုတတ်တယ် ။ လာစော်ကားပြီး လာငြိပြီ ဆိုရင်တော့ စိန်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ် အထိ လိုက်မဲ့သူပဲ ။ ပင်ကိုစိတ်ရင်းကောင်းတယ် ။ သူတစ်ပါးကို ပေးရမှာ ကျွေးရမှာ ထိပ်ဆုံးကပေါ့ ။ဒါပေမဲ့ စိတ်မြန် ဒေါသ ထွက်လွယ်တာကြောင့် အန္တရာယ် အမြဲ ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ စိတ်မြန်ပုံကတော့ ဖိနပ်စီးရတာ ခက်နေရင်တောင် ဖိနပ်ကိုကန်ထုတ် ရန်လုပ်ပြီး ဖိနပ်မပါပဲ လျှောက်သွာတတ်တဲ့ သူမျိုး။ ကိုယ်ကို လာစော်ကားလာရင်လဲ ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ ဖြစ်ခဲ့တာကို စဉ်းစားပြီး စိတ်ထဲမှာ တစ်နုံ့နုံ့နဲ့ တွေးပြီး ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဒေါပွနေတတ်တယ် ။ အဲဒီစိတ်ကလေးကို ထိန်းနိုင်တဲ့ နေ့ရောက်ရင် ချမ်းသာကြီးပွားတဲ့ လမ်းပေါ်ကို စရောက်တဲ့နေ့ပါပဲ ။ ဘယ်သို့ဆိုစေ ``လူဖြောင့်စိတ်တို´´ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အလွန်ရိုးဖြောင့်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ။။။။
ရင်တဲမှာစာနာတတ်တယ် ၊ ခံစားတတ်တယ်၊ ကြင်နာတဲ့စိတ်အပြည့်ရှိနေတယ် ။ သိပ်ကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်တယ်။ ချစ်သူခင်သူဖြစ်စေ သတ္တ၀ါတွေကိုဖြစ်စေ ``သနားပါတယ်နော်´´ ဆိုပြီး စာနာစိတ်နဲ့ အမြဲ ကူညီလို့စိတ်ရှိတယ် ။သနားအောင်ပြောရင် ဘယ်လောက်စိတ်ဆိုးနေပါစေ ခွင့်လွှတ်တယ် ။ ဂရုဏာသမားမို့ ရန်သူကိုတောင် သနားတတ်တဲသူ ။စိတ်ဆိုးလဲ ခဏပဲ ။ရန်သူကို သူ့ခမျာ ငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံး ရန်လိုနေတာ သနားပါတယ်တဲ့လေ။ဒါပေမဲ သူကသူတစ်ပါးအပေါ် ဂရုနာထားသလိုသူ့အပေါ်မှာ ဂရုစိုက်မှ ကျေနပ်တတ်တဲသူ။ သူကိုဂရုမစိုက်ဘူး အလေးမထာဘူး အချစ်ပေါ့တယ်လို့ ထင်ရင် စိတ်ကောက်ပြီး ၀ုန်းတိုင်းကျဲ အရွဲ့တိုက်တတ်သူ။ ၀မ်းနည်းလွယ်တယ် တစ်ဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်တယ် ။ ငါကောင်းသလောက်ငါ့အပေါ်မကောင်းဘူးလို့ စိတ်ဝင် ၀မ်းနည်းသွာပြီဆိုရင် အမြန်လေးသာ ချော့လိုက်ပါ ။လူပုံစံ စတိုင်၊ ဟန်ပန်က အစ ပြုမူပြောဆိုပုံက မာကျစ်ကျစ် ၊ဘုခွပြော၊ မသနားတတ်တဲ့ ကြင်နာစိတ်မရှိတဲ့ သူလိုအပြင်ပန်းမှာ ပေါ်နေတယ် ။ တကယ်အတွင်းစိတ် ရင်ထဲမှာတော့ ဂရုဏာ အပြည့်ရှိတဲသူပါ ဂရုဏာကြီးတဲ့ ဟန်ဆောင်နေတဲ့ သူနဲတော့ တခြာစီပေါ့ ။သူ့သဘော သူ့သဘာဝ သူ့မနောကိုသိတဲ့ သူတွေကတော့ လေးလေးစားစား နဲ့ သူ့အရိပ်ကို ခိုဝင်ကြတယ် ။ ဦးဆောင်သူ ၊ဆရာတွေ ၊ သမားတော်တွေ တော်တော်များများကတော့ ကရုဏာရှင်တွေပေါ့ ။
မုဒိတာကို လက်ကိုင်ထားနိုင်သူမျိုးကတော့ ရှားပါးလှပါတယ် ။သူကတော့ ရှားရှားပါးပါးထဲက သူတစ်ယောက်မို့ လူတစ်သောင်းမှာ တစ်ယောက်တွေ့ခဲလှတဲ့ မုဒိတာ ပွားနိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပေါ့ ။သူတစ်ပါးအောင်မြင်တာ ၊ချမ်းသာကြွယ်ဝတာ ၊ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်တာ၊နာမည်ကြီးတာ ၊ငွေရတာ ၊အလုပ်တိုးတတ်တာ တွေ့ရင် ကိုယ်ကပဲ ဒါတွေကို ခံစားနေရသလိုလိုနဲ့ ပိတိဖြာပြီး ဘေးကနေကြည်နူးနေတတ်တဲ့ သူမျိုး ဒီကမ္ဘာမှား ရှားပါတဲသူပေါ့။ မနာလို ၀န်တိုစိတ်မရှိဘူးအတင်းအဖျင်းမပြောတတ်ဘူး ၊မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ရှိတယ် ။အရာရာ ရင်ထဲ ခံစားပြီးမှ လုပ်တတ်ပြောတတ်တဲ့သူ ။မှန်ကန် မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အောင်မြင်မှုထိတ်တန်းရောက်တယ်။ ကိုယ်က သူတစ်ပါးကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာ ၊သူတစ်ပါးကို ငယ်ကျိုးငယ်နာ ဖော်ပြီး ဒုက္ခပေးတာမျိုးလုံးဝမုန်းတီးတယ် ။ ကိုယ်ကလဲ မလုပ်ဘူး၊လုပ်ရပ်တွေကိုလဲ လက်မခံဘူး ။ရှောင်ရှားတယ် ။.သူတစ်ပါးအားနည်ချက်အားသာချက်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး ချီကျူးပြီးကောင်းတဲ့ အပြုသဘောတွေကို အကြံပေးမှုလေးတွေကြောင့် သူ့ကိုချစ်ခင်သူတွေပေါတယ် ။မနာလိုဝန်တိုစိတ်မရှိပဲ သူတစ်ပါးအပေါ် မျှဝေခံစား တတ်လို့ ကြီပွားအောင်မြင်မှာ မလွဲပါဘူး ။အရာရာ အပေါ်မှာ ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နဲ့ ဖြစ်ထွန်းစေသလို ကိုယ်တိုင်လဲ ဖြောင့်ဖြောင့် မှန်ှမှန်နဲ့အမြဲကြိုးစားနေတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့  နှလုံးသား ပိုင်ရှင်တစ်ဦးပါ ။
အလွန်ထူးခြားတဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်ပေါ့။ ဘာသိဘာသာ အေးအေးဆေဆေးပဲ နေတတ်တယ် ။ သူုတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုလဲ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်အောင် အမြဲကြိုးစာနေတတ်တယ်။ ၀င်ပြီး စွတ်ဖက်တဲ့ သဘာဝ ကင်းတယ် ။ရန်သူကိုတောင် ဒေါသထွက်ပြီး ရင်မဆိုင်ပဲ မသိသလို့ ကိုယ့်ကို ရန်လုပ်တာ မဟုတ်သလို့ ခပ်မဆိတ်နေတတ်တယ်။ ဥပေက္ခာပြု ကျောခိုင်းနေတတ်တယ် တည်ကြည်တည်ငြိမ်ပြီး လူးသားအာလုံးကို ကိုယ်စိတ်ကမှန်တယ်ထင်တာလုပ်နေကြတာပဲတဲ့ ။ ဘာဝင်စွတ်ဖက်စရာလို့လဲဆိုတဲ့ သဘော ထားတတ်တယ် ။ ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ၀န်းကျင်အလုပ်ကို စူးစူးစိုက်စိုက် လုပ်တတ်လို့ အောင်မြင်ကြီးပွားကြပါတယ် ။ ထူးခြားချက်က အနေအေးပြီး အရာရာ ကိုမသိဘူးမထင်နဲ့ ။ အရာရာကို သိတယ် လေ့လာတယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲ လေ့လာနေတယ် ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းဆက်တွေအပေါ် နားလည်လွန်းလို့ အရာရာကို အပြစ်မမြင်ပဲ နေတတ်တဲ့သူ ။ အခက်အခဲတွေ ၊ ဒုက္ခတွေကို သူ့ဆီမှာ အကူညီတောင်း ကြည့်။ ကိုယ့်ပြသနာ တစ်ခုကို သူ့ပြသနာတစ်ခုလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သဘောထာပြီး ကူညီမှာသေချာတယ် ။ကိုယ်နဲ့ မပတ်သက်သမျှ ၀င်မပါဘူး။ ကိုယ်နဲ မိတ်ဆက်မပေးသမျှ မည်မျှမျက်မှန်းတန်းနေပါစေ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူး ။ ယဉ်ကျေးတယ် သိမ်မွေ့တယ် ၊ အရေကြုံလာရင် တကယ်အားထားရတယ် ။ အကယ်ကို အမြင်ကြည်လင်တဲ့ သူတွေပေါ့ ။တစ်နေ့မှာသူဟာ ဘာသာ သာသနာအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သူ တွေလို့ ရှေ့ပညာရှိတွေက ဆိုပါတယ် ။
ဒီပညာရပ်လေးကို အသုံချပြီး လူတွေကို နာလည်ကြည့်ပါလာ ။ ချစ်သူရွေမယ် ၊ဘ၀ကြင်ဖော်ရွေမယ်ဆိုရင် ရွေစရာ အားလုံကိုတွက်ချ။ကိုယ်အတွက်လဲ တွက် ပေါ့။ သူအတွင်သဘောကို သိလို့ ရှေတိုမယ်ဆိုရင်လဲတို နောက်ဆုတ်မယ်ဆိုရင်လဲ ဆုတ်ပေါ့ ကဲ သူငယ်ချင်းတို့အားလုံ ပျော်ရွှင်တဲ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်နိုင်ကြပါစေ.......................။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/30/2012 11:42:00 AM No comments:
သုံးခွမြို့ ရေအလှူ ( 28,29 /4/ 2012 )
အေပရယ်လ 30, 2012 တွင် 3:34pm မှာ ဇာတိမာန် မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
ရေတွေကို ကားပေါ် တင်ကြတယ်
သုံးခွမြို့က လုပ်အားပေး ညီအစ်ကိုများ
အကျီအဖြူလေး ၀တ်လာတာ မကြာခင်မှားပြီလေ
ဗူးပြောက်ရင် 5000 ဆိုလို့ ရေနေရတာဗျို့
နေ့လယ် ထမင်းစား နားတဲ့ နေရာပါ
ပင်ပင်ပန်းပန်း ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ
ရေ လာလှူတာ ကလေးတွေရော ခွေးတွေပါ ပျော်နေတယ်ဗျာ :-)
မျှော်လင့် တကြီး ရေကို လာစောင့် ယူတဲ့ ညီလေး ညီမလေး များ
ရေကို ဒီလို ဝေကြတယ်
ပင်ပန်းပေမယ့် ပျော်ပါတယ် .... ၊ အတိုင်းမသိ ပီတိဖြစ်ပါတယ် ...... ။
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ရေ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ သာဓုခေါ်ကြနော် ။
ကျွန်တော်တို့4,5,6(5) လပိုင်းမှာ ထပ်သွားမယ်ဗျာ ။
ဒါန ဒါန ဒါန ကာလ ဒါနကို အတူတူပြုဖို့
အားလုံးကို ဖိတ်ပါတယ် .............. ။
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ ရေရှားပါးမှု့ကို ရင်ဆိုင်ရင်း
ပရဟိတ အသင်းတွေကို မျှော်နေကြတဲ့
မေတ္တာရေစင်တွေ သွားတိုက်ကြအောင်ဗျာ .............. ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/30/2012 09:36:00 AM No comments:
ဝမ်းဗိုက်မှာ အဆီကျစေမဲ့နည်းလမ်း ၉ သွယ်
April 29, 2012 ရက် ၊ 17:17 တွင် လမင်း... ရေးသားခဲ့သော ဘလော့ဖြစ်ပါသည် ။
လေ့ကျင့်ခန်း အားလုံးဟာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့အခါ ဝမ်းဗိုက်အဆီကျအောင် စွမ်းအားမြင့် လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ အမျိုးသမီးအုပ်စု သုံးခုကို တစ်ပတ်မှာ ငါးကြိမ်ခန့် မတူညီတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်စေခဲ့ရာ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းပုံချင်း တူပေမယ့် စွမ်းအားမြင့် လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ဆောင်တဲ့ အုပ်စုတစ်ခုရှိ အမျိုးသမီးတွေကသာ ဝမ်းဗိုက်အဆီ လျော့ကျမှုရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ စွမ်းအားမြှင့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ အိပ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်း၊ ခါးလှည့် လေ့ကျင့်ခန်းစတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အမျိုးအစားတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု ဟော်မုန်း ကော်တီဆော အဆင့်မြင့်တက်မှု ရှိတာက ဝမ်းဗိုက်အဆီတိုးတာနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိပါတယ်။ ညဘက်မှာ ကော်တီဆော ဟော်မုန်းအဆင့် လျော့ကျအောင် အိပ်ရာမဝင်ခင် တစ်နာရီအလိုမှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို ပိတ်ပြီး အနားယူပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကို ညဉ့်နက်တဲ့အထိ အသုံးပြုတာကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျပါလိမ့်မယ်။
တစ်နေ့မှာ ရှလကာရည် ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်းသောက်တဲ့ အဝလွန်သူတွေက အချဉ်ရှောင်တဲ့ တခြားသူတွေထက်ဗိုက်ပူတာ ငါးရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျမှု ရှိစေတယ်လို့ ဂျပန်သုတေသီတွေက လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှလကာရည်မှာ အဓိက ပါဝင်တဲ့ Acetic Acid ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အဆီတွေ လောင်ကျွမ်းအောင် လှုံ့ဆော်မှုပေးတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ ပြုလုပ်ရမယ့် နည်းကတော့ အစာမစားခင်မှာ ရေနွေးတစ်ဖန်ခွက်ထဲကို ရှလကာရည် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း ထည့်ပြီး သောက်သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/30/2012 09:28:00 AM No comments:
ဧပြီလ 27, 2012 5:41pmတွင်★★Ye latt★★ မှတင်ပြခဲ့ပါသည်
ကြွက်နို့ဟု ခေါ်သော Wart ရောဂါ
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/30/2012 09:23:00 AM No comments:
မလုံ့ တလုံသမီးပျိူပုံကြောင့် ထိုင်းလွှတ်တော်ကြီးရပ်ဆိုင်းရ
★★Ye latt★★ ဧပြီလ 27, 2012 1:51pmတွင်★★Ye latt★★ မှတင်ပြခဲ့ပါသည်
မလုံ့ တလုံသမီးပျိူပုံကြောင့် ထိုင်းလွှတ်တော်ကြီးရပ်ဆိုင်းရ...
ထိုင်းနိုင်ငံလွှတ်တော်တွင် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု၌ မလုံ့ တလုံဝတ်
ဆင်ထားသည့် အမျိူးသမီးတစ်ဦး၏ပုံတစ်ခု လွှတ်တော်ခမ်းမရှိတီဗီမှန်သားပြင်ကြီးပေါ်တွင်ပေါ်လာခဲ့ သ
ဖြင့် (ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့ သဖြင့် ) လွှတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခဲ့ ရပါတယ်...
အမျိူးသမီးတစ်ဦး၏မဖွယ်မရာ ဆွဲဆောင်မြူဆွယ်နေသည့် ပုံ အနီးကပ်ရိုက်ချက်အား ပြည်သူ့ လွှတ်တော်
အမတ်မင်းများအကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးနေစဉ် ဖန်သားပြင်၌ ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
လွှတ်တော်ထဲမှာ အိပ်ငိုက်နေတဲ့ အမတ်မင်းတွေနိုးကြားလာအောင်များ ထုတ်လွှင့် ပြလေသည်လားမသိ...
ထိုပုံရိပ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံ၏အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုအတွက် အခြေအတင်
ဆွေးနွေးနေစဉ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် မှု တီဗီဖန်သားပြင်တွင်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်...
အမတ်မင်းတစ်ဦးမှ သတိပေးတိုင်ကြားခဲ့ မှုကြောင့် တီဗီဖန်သားပြင်အား အလျင်အမြန် ပိတ်ပစ်ခဲ့ ရပြီး
ဆွေးနွေးပွဲအားလည်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ ရပါတယ်...
သဘာပတိ ဆုန်ဆက်ကီယက်ဆူရာနွန့် ကတော့ ထိုပုံရိပ်ပေါ်ထွက်လာရခြင်းဖြစ်ရပ်ဟာ လွှတ်တော်အပြင်
မှ ဟက်ကာများရဲ့ နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ဖြစ်ပုံရတယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ၎င်းကို
ပြောကြားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
အဆင်သင့် ပါပဲလို့ သတင်းပေးချင်တာနဲ့ တူတယ်....
အမျိူးသမီးတစ်ဦးအတွင်းခံဘောင်းဘီမပါပဲ သူမ၏ပေါင်အတွင်းလက်ထည့် ထားကာ လဲလျောင်းနေသည့် 
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ပါဓါတ်ပုံအား အမတ်မင်းတစ်ဦးမှ ရိုက်ကူးခဲ့ ပုံရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
လွှတ်တော်အမတ်များဟာ နောက်ပိုင်တွင်အခြေအတင်ဆွးနွေးခြင်းအားဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ ကြပါတယ်...
၎င်းတို့ ဆွေးနွေးကြသည့် အကြောင်းအရာကတော့ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်မူကြမ်းရေးဆွဲနိုင်ရေး
အတွက် လက်ရှိအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များဒုတိယအကြိမ် စိစစ်ဖတ်
သူတို့ တိုင်းပြည်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလည်းပြင်လို့ ၊ ဆွဲလို့ ကိုမပြီးနိုင်ဘူး...
Proceedings in Thailand's parliament have been interrupted after the graphic image ofasemi-naked woman flashed up on giant screens duringadebate. The close-up picture ofayoung woman strikingaprovocative pose appeared on monitors as an MP addressed the house.
The images appeared in between footage of the debate, onacontroversial constitutional amendment. The session was halted and the monitors hastily switched off after an MP complained.
The origin of the images is now being investigated. The Speaker, Somsak Kiatsuranont, said an official told him that the image's appearance was the work of hackers outside of parliament.
Photographs of the incident apparently taken by an MP seem to showawoman reclining without underwear and holding her hand to her groin. MPs later resumed their debate, devoted to the second reading ofaconstitutional amendment aimed at paving the way for the drafting ofanew constitution.
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/30/2012 09:19:00 AM No comments:
အာကာသ ၀တ်စုံနဲ့ လက်ထပ်ပွဲ
ဧပြီလ 30, 2012 4:10pmတွင်★★Ye latt★★ မှတင်ပြခဲ့ပါသည်
လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကို ထူးဆန်းတဲ့ပုံစံနဲ့ ဆင်နွှဲလိုပါသလား ။ ဒါဆိုရင်တော့ နမူနာ ပုံစံလေး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ။ ဒါကတော့ အာကာသထဲမှာ ထက်ထပ်တဲ့ပုံစံလို ၀တ်ဆင်ပြီးလက်ထပ်ကြတာပါ ။ ပျော်စရာ မကောင်းပေဘူးလား ။ နှစ်ယောက်စလုံးက အဖြူရောင်ဝတ်စုံတွေနဲ့ ခေါင်းဆောင်းတွေလည်း ဆောင်းထားသေးတယ် ။ ကဲဒီလိုလက်ထပ်ပွဲလေးဆင်နွှဲကဖို့ရော သူငယ်ချင်းတို့ စိတ်ကူးမိကြရဲ့လား ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/30/2012 09:16:00 AM No comments:
ငှက်ပျောသီးကို နေ့စဉ် စားသင့်သော အကြောင်းရင်း (၁၂) ချက်
အေပရယ်လ 30, 2012 တွင် 7:37pm မှာ Nandar မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
နန္ဒာမ ( ဒေါက်တာခင်မိုးမိုး )
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/30/2012 09:12:00 AM 1 comment:
ဆံမျှင်လေး တွေကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းမလည်း။
အေပရယ်လ 30, 2012 တွင် 7:26pm မှာ Nandar မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
ကျွန်မတို့မိန်းမသားများအတွက် အလှအပထိမ်းသိမ်းရာမှာ ဆံမျှင်လေးများရဲ့တန်ဖိုးဟာ နံပါတ်တစ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မိန်းမတို့ ဘုန်း ဆံထုံး ဟုရှေးယခင် မင်းများလက်ထက်ကတည်းက စာဆိုကျော်များက သတ်မှတ်ခဲ့ကြရာမှာ ယခုထိအသက်ဝင်ရှင်သန်နေဆဲ ဆောင်ပုဒ်လေးများပင် ဖြစ်ပါသည်။ Vitamin B, Vitamin A, Vitamin E, Iron ,Zinc , Folic Acid and Protein များပါဝင်သော အစားအစာများသည် ဆံနွယ်များလှပမှု အတွက် အဓိကအထောက်ကူပြုစေနိုင်သော အစားအစာများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအစားအစာများအများဆုံးပါဝင်သည့် စွမ်းအင်ပြည့် အစားအစာ ခြောက်မျိုးကို စာဖတ်ချစ်သူ၊ အလှအပကြိုက်တတ်သူများအတွက် ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒိန်ချဉ်တွင် ကြွယ်ဝသောဗီတာမင်များမှာ ပရိုတင်း၊ ကယ်စီယမ်၊ Vitamin B ၊ Mineral သတ္တုများ၊ ထိုအရာများမှ ဆံပင်သားအတွက် လိုအပ်သော ရေဓါတ်၊ စိုစွတ်မှုနှင့် သန်စွမ်းခိုင်ခံ့မှုတို့ကို အားဖြည့်စေပါသည်။ ဘတ်တီးရီးများအားကြောင့်ဖြစ်သော ဆံသားမှိုစွဲကပ်ခြင်း (သို့) ဗောက်ထခြင်း၊ ဆံပင်သားကျွတ်လွယ်ခြင်းတို့ကိုလဲ ကာကွယ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒိန်ချဉ် (flavor) နှစ်သက်ရာ တမျိုးမျိုးအား live food (အပျင်းပြေစားခြင်းမှ) ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းခြင်း တမျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်။
Vitamin C , Iron နှင့် Folic Acid ကြွယ်ဝသော ဟင်းနုနွယ်ရွက်မှ ဆံပင်များပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အသစ်ပြန်လည် မွေးဖွားခြင်းကိုလဲပြုလုပ် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သက်သက်လွတ်စားမယ်ဆိုရင်တော့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကိုပဲအကြံပေးပါရစေ။ ဒါမှ ထိပ်ပြောင်သူများနဲ့ ဆံပင်ခပ်ထူထူလေးများလိုအပ်သော မမများအတွက် အကျိုးလဲရ သက်လဲသာတဲ့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကို အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူစားသုံးကြပါစို့လို့ ။
ညွှန်း - http://fancycake-beauty.weebly.com/ နန္ဒာမ ( By ဧရာဝတီ )
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/30/2012 09:11:00 AM No comments:
ဟာသဓါတ်ပုံ ကာတွန်းများ သူငယ်ချင်းတွေပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက်ပါ။
အေပရယ်လ 30, 2012 တွင် 11:17pm မှာ clementzaw မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
ဒီ Page လေးဟာ အထူးတည်လည်ဘာမှပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေပျော်ရွှင် စေရန်အတွက်သာ Website ပေါ်တွင်တွေ့ရှိသော ပုံလေးများအား ပေါင်းစပ်ကာ တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်သော ပုံများအား Like & Share လုပ်ခြင်းဖြင့် ဘ၀မှာပင်ပန်းသမျှ အားလုံး ပျော်ရွှင်စေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ အလှည့်ကျ မီးပေးဝေမှု့ အချိန်ဇယား
မှန်လားသိဘူး... မှန်ရင် Like လုပ်...
သွားမရှိတော့ပေမယ့် ကိုယ့်မှာ... ဇရှိပါသေးဒယ် အတဲရေးရယ်... ငှယ် ငှယ် ငှယ်... :P
ရယ်စရာဟာသတော့မဟုတ်ဘူး... ဒါမယ့် ခေါင်းဆောင်ကွာရင် ဘယ်လောက်ကွာခြားမှု့တွေရှိတယ်ဆိုတာလေး...
အွမ်း.... သတိပေးချက်ကလဲ... :
ဟိုက်ရှားလဘတ်.... လန်းလှချီလားတမီးရယ်.... :S
စိတ်ချ မမရေ... အဲစည်းကို ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လုံးဝမကျော်စေရဘူး.. :
ဒီရုပ်တုက အင်မတန် အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်။
ကျွန်တော်တော့ 'ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထုဆစ်ခြင်း' လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။
လူတိုင်း ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ထုဆစ်နိုင်ကြပါစေ။
ပျော်တဲ့အခါလည်း ပျော်ကြတာပေါ့... ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးလေးတွေလည်းမမေ့ကြနဲ့ပေါ့...
လဲနေသူ ထူပေးပါ... အားငယ်သူ အားပေးပါ... သတ္တ၀ါအချင်းချင်း စာနာပါ... :)
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/30/2012 09:08:00 AM No comments:
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ “ ဦးခေါင်းရိုးတော်ဓာတ်တော် ” ပုံ..
အေပရယ်လ 30, 2012 တွင် 9:31am မှာ ချစ်ဦးမောင် မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။
သူငယ်ချင်းတို့ အားလုံးကိုဖူးမျှော်စေခြင်လို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ “ ဦးခေါင်းရိုးတော်ဓာတ်တော် ”ပုံတွေတင်ပေး
“ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ “ ဦးခေါင်းရိုးတော် ဓာတ်တော် ”ကိုဟောင်ကောင်တွင်ပူဇော်ခံနေပုံ ”
“ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဦးခေါင်းရိုးတော်ထည့်သည် ဓာတ်တော်ကြုတ် ”
“ ဓာတ်တော်ကြုတ်အား အနီးကပ်ဖူးမြှော်ရပုံ ”
“ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ “ဦးခေါင်းရိုးတော်ဓာတ်တော် ” ပုံအားအနီးကပ်ဖူးမြှော်ရပုံ ”
ကဲသူငယ်ချင်းတို့ရေ အားလုံးဖူးမြှော်ပြီး ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေ ရရှိနိုင်ကြပါစေဗျာ....
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/29/2012 09:45:00 PM No comments:
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း ဦးသန့်ဗိမာန်တွင် ဂါရဝပြု
သံစဉ်ဖြူဖြူ က April 29, 2012 နေ့မှာ 7:07pm အချိန်တွင် တင်ခဲ့တယ်
အကြောင်းကြားစာ ပို့မယ် View Blog
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီးမွန်းသည် ယနေ့ ညနေပိုင်း ၃ နာရီ ၅၇ မိနစ်က ရွှေတိဂုံဘုရား တောင်ဘက်မုခ်ရှိ ပထမဆုံး အာရှသား ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်၏ ဂူဗိမာန်သို့ သွားရောက် ဂါရဝပြုခဲ့သည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 4/29/2012 07:06:00 AM No comments:
မလုံ့ တလုံသမီးပျိူပုံကြောင့် ထိုင်းလွှတ်တော်ကြီးရပ်...
ဟာသဓါတ်ပုံ ကာတွန်းများ သူငယ်ချင်းတွေပျော်ရွှင်စေဖု...
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ “ ဦးခေါင်းရိုးတော်ဓာတ်တော် ” ပု...
စာစောအိပ်လို့စောစော ထလို့စောစော လမ်းလျှောက် ကြ...
ကိုလံဘီယာမှ လိပ်ကလေးဟု ထင်ရှားသော ကလေးငယ်၏ ကျောပြင...
Free download ဆွဲနိုင်တဲ့ မြန်မာစာအုပ်တွေ လိုချင်တ...
သေပြီးပြန်ပေါက်တဲ့ တစ္ဆေ သစ်ခွ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ထူးဆန်းအံ့ ဖွယ် ကျွန်းနှင် ...
သတိထားရမယ့် Virus (၉)မျိုး နှင့် သူတို့ရဲ့ အလုပ်လု...
လူသား ဟုတ်မဟုတ် အငြင်းပွားစေသည့် အလှနတ်သမီး
သေပြီးတဲ့ အဆိုတော် အသက်ပြန်ရှင် သီဆိုနေသလား အံ့သြဖ...
ဂျနီဗာ ၊ ဆွစ်ဇာလန်က အရောင်မတူတဲ့ မြစ်ဆုံ
အများနဲ့ မတူတမူထူးခြားစွာသယ်ယူပိူ့ ဆောင်နေသောပုံဆန...
မေမေရဲ့ ရှစ် ကြိမ်မြောက်လိမ်ညာခြင်း
facebook မှာ တွေ့ရင်ပြောကြပါ
ဗေလုဝရဲ့ အင်တာဗျူး အခန်းကဏ္ဍ...
နွေရာသီတွင် သင့်ကို အေးမြစေမည့် အစားအသောက်များ
လက်ချောင်းလေးတွေ မရှိပေမယ့် လက်ရေးအလှဆုံးဆု ဆွတ်ခူ...
အမျိုးသမီးများ စုပေါင်း၍ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ရေလှူဒါန...
ဖုန်း အကြောင်း သိကောင်စရာ
ကွန်ပြူတာ သမားများ အမြင်အာရုံ မထိခိုက်စေဖို့ ကူညီေ...
မိုးကုတ်မြို့မှ ကျောက်တွင်း ဗဟုသုတများ
အမျိုးသားများကျမ်းမာရေးအတွက် အခြေခံကျသော နည်းလမ်းမ...
မြန်မာ လာအို ထိုင်း ကမ္ဘောဒီးယား လေးနိုင်ငံ သင်္ကြန်
ဆေးပညာနှင့်ပတ်သက်သော အယူအဆ အမှားများ
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ သဘောထားများ ခင်မောင်ညိ...
ကျွန်တော်သဘောကျခဲ့တဲ့ လူမိုက်၊ လူတော်၊ ပညာရှိ အယူအ...
တန်ဖိုးနည်း Jumping ဆိုင်ကယ် ဝယ်စီးမယ်
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဒီရက်မှာမှ စိတ်ဝင်စားစရာ
ပြီးပြည့်စုံသော “အိမ်ကလေး”ထဲမှာ နေသွားကြပါစို့
ဒီလို အဖြစ်မျိုးနဲ့ မကြုံတွေ့ကြပါစေနဲ့
မြန်မာ ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူတတ်ပါစေ
မြန်မာ့ ကျေးလက်များ အတုယူစရာ
ထိုင်းနိုင်ငံက နာမည်ကြီး ကျားကျောင်းကို လေ့လာကြည့်...
ဘ၀ကို အရှုံးမပေးသောလူ(အောင်မြင်မှု၊ ပြည့်စုံခြင်း)
ဖန်တီးသူတို့ရဲ့ စားစရာ အနုပညာလက်ရာများ
ဒီဘ၀ ဒီခန္ဓာ ဘယ်သူလာလို့ ထောက်ပံ့ပါလိမ်
ကျန်းမာသက်ရှည်ရေးအတွက် ဥတုအလိုက် ရှောင်ကြည်လိုက်နာ...